Masangano Okurudzira Vakuru muHurumende Kutaura neMauto
Mbudzi 09, 2010
Masangano akazvimirira anodarika makumi mashanu ari kukurudzira vatungamiri vatatu vari muhurumende yemubatanidzwa kuti vagare pasi nevakuru vemauto enyika vachivavimbisa mamiriro eremangwana ravo, kuitira kuti ivo vasatadzisa kuchinjana masimba kwevatungamiri vezvematongerwo enyika murunyararo.
Sangano reHuman Rights NGO Forum, iro rinobatanidza masangano anorwira kodzero dzevanhu nehutongi hwejekerere, rakakurudzira svondo rapera mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, pamwe nevatungamiri vemapato maviri eMDC vanoti, VaMorgan Tsvangirai naVaArthur Mutambara, kuti vagare pasi vachitarisisa zvido pamwe nezviri kutyiwa nevakuru vechiuto kuitira kuti vasavhiringidza mafambiro esarudzo kana munyika moitwa sarudzo.
Vakuru vechiuto, mapurisa pamwe nevasori vanonzi vari kuramba kuti masimba apiwe kune mumwe munhu asina kurwa hondo yerusununguko. Vakuru ava vose inhengo dzeboka reJoint Operation Command, kana kuti JOC, iro rinopomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga munguva yesarudzo dza2008.
Boka iri raifanirwa kunge rakaputswa pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa mushure mekuumbwa kweNational Security Council, iyo ina VaMugabe sasachigaro, uye VaTsvangirai vari mutevedzeri wasachigaro.
Mukuru anoona nezvemabasa musangano reNANGO, VaCephas Zinhumwe, vaudza Studio7 kuti vatungamiri vatatu ava havafanirwi kuneta mukuedza kwavo kutaura nevatungamiri vemauto.